Wararka Maanta: Khamiis, July 22, 2010-Qaramada Midoobay oo walaac ka muujisay cunto-yaraanta ka jirta Soomaaliya iyo xaaladda shacabka
Xidhiidhiyaha gargaarka bani’aadamnimo ee Qaramada Midoobay Mr. Mark Bowden ayaa sheegay in xaaladda bani’aadamnimo iyo cunto ee dadka ka baro-kacay dagaallada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay liidato. “Cunto-yaraanta Soomaaliya waajahday ma saamaynayso oo kaliya goobaha ay xukumaan Al-Shabaab ee sidoo kale waxay guud ahaan dalka.” Ayuu yiri Bowden oo Warbaahinta u waramay.
Mark Bowden wuxuu sheegay in ay jiraan tallaabooyin ay ka qaadeen sidii arrintan wax looga qaban lahaa, hase ahaatee aanay ku filnayn. Waxaanu sheegay oo kale in ay Warbixin ku saabsan habka isticmaalka qaldan ee caawimada iyo siyaasadda ay u gudbiyeen guddida Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan cuna-qabataynta Soomaaliya.Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 40% ama 3-Milyan iyo afar boqol oo qof oo dadka Soomaalida ka mid ahi.
Barnaamijka gargaarka bani’aadamnimo ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dalabkoodii sanadkan ee 596-Milyan oo Doollar, kuwaas oo 25% oo 50-Milyan oo Dollar ah ay u dalbadeen inay wax kaga qabtaan Biyaha, nadaafadda iyo Caafimaadka, ay heleen 335-Milyan oo kaliya.